Maqal: Howlgalo Ka Bilowday Gaalkacyo. – SBC
Maqal: Howlgalo Ka Bilowday Gaalkacyo.
Posted by Webmaster on Julaay 8, 2015 Comments
Magaalada Gaalkacyo Xarunta gobolka Mudug waxaa ka bilowday Howlgallo Ciidan kuwaas oo lagu dabagalayo Dhalinyaro mudooyinkii u dambeeyay halkaas ka waday Falal amaan darro kuwaas oo ay dadku ka cabanjireen.
Masuuliyiinta gobolka Mudug, kuwa degmada Gaalkacyo iyo laamaha Amaanka ayaa kulan ay maanta ku qabteen magaalada waxa ay ku faah faahiyeen howlgaladan ay bilaabeen ciidanka, iyagoo sheegay in howlgaladaas lagu ugaarsan doono dhalinyaro liis magacyadooda ay ku qoran yihiin la hayo, kuwaas oo falal amaan darro ka waday.
Taliyaha Qaybta booliska ee gobolka Mudug C/laahi Shire Dool ayaa sheegey in waalidiinta laga codsanayo inay ilmahooda ilaashadaan xiliayada habaynkii ah waxaana uu sheegey in dhalinyarada ay dhibaato xoogleh ay magaalada ku hayaan.
Ciidanka Amaanka Gaalkacyo ayaa shalay la arki karay howlgallo waaweyn oo ay ka sameynayaan magaalada iyagoo halkaas ka soo qabqabtay dadka ciyaar farabadan oo dhalinyaro ah.
Howlgaladaan ayaa la rajeynayaa iney wax ka badalaan xaaladda amniga Ee Magaaladda Galkacyo iyadoo xiligan lagu guda jirro bisha Ramadaan.